Q सर, मेरो श्रीमतीलाई हालै गरिएको ईकोकार्डियोग्राममा भएको गम्भीर ईसेन्ट्रिक मिट्रल रेगुजिटेसन भनेको के हो... ??
मानवको मुटुको चार कक्षहरू हुन्छन् । प्रत्येक कक्षहरूको बीचमा, त्यहाँ बाधाहरू हुन्छन् जसले रगतको प्रवाह रोक्छ । मिट्रल भल्व एउटा यस्तो बाधा हो जुन बायाँ एट्रीअम र भेन्ट्रिकलको बीचमा रहेको हुन्छ । मिट्रल रेगुजिटेसनको अर्थ भनेको मिट्रल भल्वले पर्याप्त रूपमा कार्य गरिरहेको छैन र यसले बायाँ भेन्ट्रिकलबाट बाँया एट्रिअममा पछाडि प्रबाह हुने वा रगत चुहिने भइरहेको छ भन्ने जनाउँदछ । मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स यसको लागि सबैभन्दा सामान्य कारण हो । तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई सकेसम्म चाँडो मुटुरोग विशेषज्ञ भएको ठाउँमा लगेर जाँच गर्नु पर्छ ।
Q मेरी आमा ६९ वर्षको हुनुहुन्छ, अघिल्लो वर्ष हामीलाई सम्भवतः उहाँलाई पोलिसाइस्टिक मृगौलाको रोग लागेको कुरा थाहा भएको छ । उहाँलाई यो रोगको कुनै पनि लक्षणहरू पहिला कहिल्यै थाहा भएको थिएनन् । जब उहाँ लामो समयसम्म लागेको खोकीको लागि अल्ट्रासाउण्ड स्क्यानको लागि जानु भएको थियो, डाक्टरले पी.के.डी. भएको पत्ता लगाए, त्यसपछि नेफ्रोलोजिस्टले निरन्तर मृगौलाको रोगीको रगत छान्ने विधी वा डायलाइसिसको लागि जान सुझाव दिए र हामी हप्तामा दुई पटकदेखि यही गरिरहेका छौं । उहाँ अहिले सामान्य हुनुहुन्छ। के हामीले डायलाइसिस गर्न जारी राख्नुपर्छ ? उहाँ बी.पी. वा मधुमेह रोगको बिरामी होइन ।
डायलाइसिसको जारी राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा मृगौलाले कति राम्रो तरिकाले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ । डायलाइसिसको आवृत्ती नेफ्रोलोजिस्टले उहाँको उपचारमा रहेको प्रतिक्रियामा विचार गरेर मात्र निर्णय गर्न सकिन्छ । तपाईंको आफ्नो डाक्टरसँग नियमित परामर्श गर्नुहोस् र उहाँको सल्लाहको पालना गर्नुहोस् ।
Q हरेक रात पिंडुला मांसपेशिहरुमा धेरै गंभीर माशंपेशी बाउडिने हुन्छ । म सधैं काम गरेर बस्नुपर्ने ३५ वर्षीया महिला हुँ ।
अत्यधिक शारीरिक वृद्धि, निर्जलीकरण, पोटाशियम, म्याग्नेशियम वा क्यालिसियमको कमी, कमजोर रक्त सञ्चार पिडुंला माशंपेशी बाउडिने भागको केहि कारणहरू हुन् । तथापि अत्याधिक शारीरिक प्रयास तपाईंको मामलामा सम्भाव्य कारण जस्तो देखिन्छ । निम्न सुझावहरूले तपाईंलाई यसमा मद्दत गर्न सक्छ: राम्रो तरिकाले सन्तुलित आहारको पालन गर्नुहोस्, तपाईंको भोजनमा नियमित रूपमा केरा, नरिवलको पानीजस्तो खानेकुराहरू समावेश गर्नुहोस्, राम्रो पानी पुग्ने वा हाइड्रेड रहनुहोस्, तपाईंको दिनचर्यामा केहि तन्काउने अभ्यासहरु समावेश गर्नुहोस्, पिडुंलाको माशंपेशिमा तन्किने काम राख्नुहोस् । यदि यी सबै उपायहरूले तपाईंलाई ठीक भएन भने, तपाईंको औषधिउपचारको लागि आफ्नो चिकित्सकसँग परामर्श लिनुहोस् ।